The Weeknd က H&M နဲ့ collaboration ကို ဘာကြောင့်ဖျက်ပစ်ခဲ့တာလဲ? – FemaleWear.net
The Weeknd ကတော့ သူ့ရဲ့ relationship ကို H&M နဲ့ အဆုံးသတ်တယ်လို့ ပြောရမလားဘဲ မကြာခင်အချိန်ကဘဲ The Weeknd နဲ့ H&M တို့ Collaboration လုပ်လိုက်ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှာ H&M ရဲ့ လူမျိုးရေး ဘာသာရေးထိခိုက်စေနိုင်သော ’Coolest Monkey in the Jungle’ လို့စာတန်းပါတဲ့ hoodie တွေကို black child နဲ့ရိုက်ကူးထားတဲ့ Product photo တစ်ပုံကြောင့် The Weeknd က Collaboration ကို ဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီပုံကိုတော့ H&M ရဲ့ UK site မှာတင်ထားကို တွေ့ရပါတယ်။
The Weeknd ရဲ့ Twitter မှာလည်း ထိုပုံကိုတင်ပြီး “woke up this morning shocked and embarrassed by this photo. i’m deeply offended and will not be working with @hm anymore…” ဆိုတဲ့ caption နဲ့ တင်ထားတာကိုလည်း တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ H&M အနေနဲ့ ဒီပုံပြဿနာကို သတိမထားမိဘဲ လုပ်လိုက်မိတာဟာ အမြဲမီးမောင်းထိုးခံနေရမယ့်အရာဆိုတာကို Business Insider က H&M ကိုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ တချို့လူတွေကလည်း ထိုပုံကြောင့် H&M မကျေနပ်ကြပါဘူး။
H&M has apologised for the model below wearinga“coolest monkey in the jungle” jumper.
Do people not stop the person who thought of it and say, “this might not beagood idea?” pic.twitter.com/Ag9MHMgs6t
— Seán O’Regan (@SeanOR95) January 8, 2018
H&M ဘက်ကတော့ Brand ရဲ့ကျော်ကြားမှုအတွက် ပုံကိုဖယ်ရှားလိုက်ပြီး The Weeknd ကိုလည်း တောင်းပန်လိုက်ပါတယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက်ကြီးက Brand အတွက် ပထမဆုံးအမှားဖြစ်ပေမဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ ကျန်ရှိနေခဲ့အုံးမှာပါ။ အခု US Website မှာ black child မပါတဲ့ ပုံကို ဖယ်ရှားလိုက်ပေမယ့် UK website မှာတော့ $10.83 (£7.99 GBP) နဲ့အင်္ကျီကို ဝယ်ယူလို့ရနိုင်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ H&MxThe Weeknd တို့ရဲ့ collection ဟာ 18-piece ထိရှိနေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
Tags: H&M, The Weeknd
Stuart Weitzman ရဲ့ shooting တစ်ခုမှာ တွေ့ရတဲ့ Kate Moss နဲ့Gigi Hadid
အိတ်ချစ်သူများအတွက် လှပဆန်းသစ်ပြီး စျေးအရမ်းမကြီးတဲ့ Handbag Collection